Ndị ọkachamara na Semalt kọwara otú esi wepu data site na weebụsaịtị
Nchịkọta weebụ, nke a makwaara dị ka nchịkọta data weebụ, bụ usoro eji eji wepụ ihe ọmụma si Intanet. Ngwa ntanetị weebụ nwere ike ịnweta weebụsaịtị site na iji Protocol Transfer Protocol ma mee ka ọ dịrị anyị mfe wepụ data site na ọtụtụ ibe weebụ. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịchọta ma wepu ozi site na weebụsaịtị, ị nwere ike ịnwale ihe na-esonụ web scrap software - hardware services companies.
1. 80 ụkwụ
Ọ bụ otu n'ime ngwaọrụ kachasị ihe nchịkọta data. Ejiri ụkwụ 80 mara ya maka interface enyi ya. Ọ na-egosipụta ma tinye data dịka ihe ị chọrọ. Ọ nabatara ozi achọrọ na sekọnd ma nwee ike ịrụ ọrụ dịgasị iche n'otu oge. Ogwe ụkwụ 80 bụ PayPal, MailChimp, na Facebook.
Site na Spinn3r, anyị nwere ike ịchọta data ma kpochapụ ebe nrụọrụ weebụ niile. Ngwaọrụ a na-ewepụta data sitere na ebe nrụọrụ weebụ na-elekọta mmadụ, ntanetị akụkọ, RSS na ATOM na ntanetị onwe. Ị nwere ike ichekwa data na usoro JSON ma ọ bụ CSV. Spinn3r na-achọta data na asụsụ 110 ma wepu spam site na faịlụ gị. Nchịkọta njikwa ya na-enye anyị ohere ịchịkwa bọọlụ ahụ mgbe a na-efesacha saịtị ahụ dum.
Ọ bụ otu n'ime ihe kachasị mma nchịkọta data . Bubata. ọ bụ onye a ma ama maka nkà na ụzụ ya na-abaghị uru ma dị mma maka ndị mmemme na ndị na-abụghị ndị mmemme. Ọ na-ewepụ data site na ọtụtụ ibe weebụ ma na-ebupụ ya na CSV na JSON formats. Ị nwere ike iwepu ihe karịrị 20,000 ibe weebụ n'otu awa, na mbubata. io na-enye ngwa n'efu maka Windows, Linux na Mac ọrụ.
5. Dexi. Ee
Ọ bụrụ na ị na-achọ iwepụta ebe nrụọrụ weebụ niile, ị ga-anwale Dexi. Ee. Ọ bụ otu n'ime scrapers data na kasị bara uru na crawlers. Dexi. a makwaara nke ọma dị ka Cloud Scrape ma nwee ike ijikwa ọtụtụ narị ibe weebụ kwa nkeji. Ntupụta ya na-eme nchọgharị na-emepụta crawlers na data nchịkọta oge n'oge. Ozugbo e nwetara data, ị nwere ike ịchekwa ya na Igbe. net ma ọ bụ Google Drive ma ọ bụ ibudata ya na draịvụ ike gị ozugbo.
Ngalaba ngwa ngwa a na-eme nchọgharị ma na-ahazi data gị nke ọma. Webhouse. a kacha mara amara maka data ya nke na-achọpụta ihe na njirimara nkà na ụzụ. Site na ọrụ a, ịnwere ike ịdọrọ nnukwu data site na isi mmalite dị n'otu API. Ọ nwere ike iwepu ọtụtụ puku ebe nrụọrụ weebụ n'otu awa ma ghara imebi iwu. Enwere ike ịbupu data ahụ na ụdị XML, JSON na RSS.
7. Anya na-ekiri Anya
Nke a bụ software bara uru na ntanetị mmekọrịta. Na Anya Scraper, ị nwere ike ịchọta data na oge dị adị ma nwee ike ibupụ ya ka ọ dịrị ka JSON, SQL, CSV, na XML.A maara ya nke ọma ma ọ bụrụ na ọ nwere ike ịchọta ma ọ bụrụ na ọ nwere ike ịchọta ma PDF ma JPG faịlụ.